श्रीलंकामा कर्फ्यू उल्लंघन गर्नेलाई गोली हान्न आदेश – Online Kendra
संसदमा बजेट पेश हुँदै, १७ खर्ब हाराहारीको बजेट आउने
आज गणतन्त्र दिवस, देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै
स्थानीय चुनाव: ३८५ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित
चितवनमा शनिबार र आइतबार गरी हप्तामा दुई दिन विदा
श्रीलंकामा कर्फ्यू उल्लंघन गर्नेलाई गोली हान्न आदेश
२८ बैशाख २०७९, बुधबार ०८:२५ NewsRoom3
बैशाख २८, काठमाडौँ । श्रीलंकामा कर्फ्यू उल्लंघन गर्नेहरूलाई देख्नासाथ गोली चलाउन आदेश दिइएको छ । प्रदर्शन उग्र हुन थालेपछि कफ्यू उल्लंघन गर्नलाई गोली चलाउन आदेश दिइएको हो ।
आर्थिक संकटका कारण श्रीलंकाका नागरिकहरूले सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । श्रीलंकामा बुधबारसम्मका लागि कर्फ्यु जारी गरे पनि विरोध प्रदर्शन जारी रहेको बीबीसीले जनाएको छ । समाचारमा जनाइएअनुसार मंगलबार राजधानीका सडक सुनसान देखिए पनि रातिमा हिंसात्मक प्रदर्शनहरू भएका छन् ।
सोमबारदेखि मंगलबारको अवधिमा सात जनाको मृत्यु भइसकेको छ । प्रदर्शनकारीले गाडीहरूमा आगजनी र तोडफोड गरेका छन् । सोमबार प्रदर्शनकारीले निवर्तमान प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षेको घरमा आगजनी गरेका थिए । प्रदर्शनमा एकजना सत्तारुढ दलका सांसदसहित पाँच जनाको मृत्यु भएपछि प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षले पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
प्रदर्शनकारीले जलाइदिएपछि पूरै देशमा कर्फ्यु जारी गरिएको छ । सोमबार राति श्रीलंकामा राजनीतिक दलका ५० भन्दा बढी नेताहरूको घरमा आगजनी भएको छ । उनीहरूले पनि अन्यत्र शरण लिएर बसिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् ।
विश्व, समाजआर्थिक संकट, कर्फ्यू, श्रीलंका
रिभर फल्स पावरको आईपीओ आजदेखि बिक्री खुला
कलंकीमा टिपरको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालकको मृत्यु
१४ जेष्ठ २०७९, शनिबार १६:०६ NewsRoom 0
जेठ १४, काठमाण्डौ । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ चितवनले शनिबार र आइतबार गरी हप्तामा दुई...
२७औं दीक्षान्त समारोह दोस्रो चरणमा विभिन्न सङ्कायका गरी एक हजार ७१२ जना दीक्षित हुने
जेठ १४, काठमाण्डौ । काठमाडौँ विश्वविद्यालयका २७औं दीक्षान्त समारोह दोस्रो चरणमा विभिन्न सङ्कायका गरी एक हजार...
१४ जेष्ठ २०७९, शनिबार १६:०४ NewsRoom 0
दाङमा साथीले बोकेको बन्दुक पड्किंदा एक जनाको मृत्यु
जेठ १४, दाङ । दाङमा सिकार खेल्न गएका एक जनाको बन्दुकको गोली लागेर मृत्यु भएको छ।...
‘कबड्डी’को चौंथो श्रृंखलाले नेपाली बक्सअफिसमा ओपनिङ कीर्तिमान कायम
‘निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमाथी अदालतको फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्छ’ : रामचन्द्र पौडेल
‘राज्यको नीति तथा कार्यक्रमले नेपाली युवाहरुको श्रम र सीपलाई बेवास्ता गर्यो’ : गोकर्ण विष्ट
थाक्रेमा एमालेबाट पन्त र आचार्यको उम्मेद्धारी परेपछि…
स्थानीयलाई जेलमा थुनेर बन्चरेडाँडामा दादागिरी शैलीले…
धुनिवेशीमा ७३ प्रतिशत बढी मत खस्यो, कुन वडामा कति ?
नगर विकास कोषमा बालकृष्ण आचार्यसहित ७ जना बोर्ड…
थाक्रे गाँउपालिकामा गठबन्धन धरापमा ! कांग्रेसको…
धुनिबेशीमा गठबन्धनको तर्फबाट क- कसले दिए उम्मेदवारी ?